Mpanamboatra sy mpamatsy fanjonoana fahavaratra ambongadiny | , resintsika noho ny
★Fanokafana ny harato ahazoana aina sy azo alaina: Tsy misy mahatsikaiky rehefa mahatsapa zavatra be loatra ny zava-drehetra. Ka 'nifaly' tamin'ity fahavaratra ity izahay tamin'ny alàlan'ny fitsangatsanganana an-dranomasina amin'ny fanjonoana ka miaina tsara ianao. Ity variana amin'ny fisaronan'ny tarehy + vozona ity dia misy rivotra manidina mamela ny hafanana handositra & hisorohana azy tsy hidona-poana. Vitao ny zavatra vita amin'ity combo mahery ity.
★Adventures tsy misy hatsembohana: Mafy ny hatsembohanao? Aza manahy! Namboarina tamin'ny fampiasana nylon premium, ity satroka maivana ity amin'ny alàlan'ny jono dia miaro sy manome hatsembohana haingana kokoa noho ny satroka vita amin'ny landihazo. Maina vetivety koa izy io mba hahafahanao mampiasa azy rehefa mila izany ianao. Mpanaradia tonga lafatra ho an'ny vatanao ivelany manaraka.
★Travel-friendly - Ity satroka masoandro fahavaratra ity dia vonona mandrakariva ary afaka miara-dia aminao na aiza na aiza itondranao azy. Saika feno ve ny kitaponao? Ity satroka masoandro fiarovana ity dia tsy azo potehina fa aleo fonosina fisaka mba hipetrahana mora foana. Na any anaty ala mikitroka ianao na beton, safari, lakana, fitsangatsangana na hetsika any ivelany, ity satroka ity dia vonona ho amin'izany.
Ireto ambany ireto ny maodely hafa amin'ny satroka fiarovana masoandro amin'ny alàlan'ny jono fiarovana ho an'ny mpanjono, raha mahaliana anao izany dia andefaso anay ny nomeraon-kaody, raha tsy manilika anao ny satroka masoandro mety tsara izany, andefaso anay ny fahamendrehanao.
Tongasoa ny kaomandy OEM momba ny satroka siny sy karazana hafa.
Ireto ambany ireto ny famantarana ananantsika
Teo aloha: Trano an-trano Alefaso ny Cap amin'ny ririnina miaraka amin'ny saron'ny sofina feno sofina ho an'ny lehilahy
Manaraka: Topim-bazaha an-doha amin'ny loha ivelany miafina mesh sun satroka ho an'ny vehivavy vehivavy
Satroka Appa Bucket
Satroka siny miaraka amin'ny tady
Satroka Camo Bucket
Satroka siny mangatsiaka
Satroka sifotra Corduroy
Satron'ny siny vita pirinty omby
Satroka siny mahafatifaty
Top Head Net Hat H ...